Food ebu Factory |Nri China na-akpụzi ndị na-emepụta ihe, ndị na-ebubata ya
Akpụkpọ anụ silicone obi bụ nke 100% nri ọkwa silicone enyi na enyi na gburugburu ebe obibi na ọ bụ BPA n'efu.Reusable na inogide.Na mgbakwunye, ọ dị mfe ịsacha, dị mma maka iji ya na efere efere, na-azọpụta gị oge na ume.
A na-eji silicone ọkwa nri 100% mee ihe a na-akpọ Mafen Cup Silicone Cake, BPA n'efu.Eco-enyi na enyi, na-adịghị egbu egbu, mgbanwe, reusable na inogide.Ọ nwere 5 shapes: gburugburu, rectangle, obi, kpakpando na rose ifuru, na multipule agba na nke ọ bụla ụdị. Ha na-adabara ma ndị okenye ma ụmụaka.
The nnukwu achicha ebu mere nke nri ọkwa silicone, na BPA, PVC free na eco-enyi na enyi, na muffins cup ebu bụ okpomọkụ mma si -104 F ka +446 F. Microwave, oven, refrigerator, friza na efere efere.Na-adịgide adịgide maka iji ogologo oge gị.
Aha ngwaahịa: Ihe eji eme achịcha silicone
Ụdị: Ugu gburugburu
Nha: Ogologo 21cm
Ọnụahịa otu : 1-2 USD
Obi Popsicle Mold Silicone Cake Mold 3D Heart Mold Chocolate Mold
Oke ibu oyi na okpomoku: Enwere ike iji ụdị swiiti a na oke okpomọkụ sitere na -40°F ruo 446°F (-40°C ruo 230°C).
Multi functional use: Nke a chocolate Mold bụ nchekwa eji na Microwave, oven, refrigerator, friza na efere efere.Enwere ike iji mee ka cupcake topper, oriri, chocolate snacks, ike swiiti, fondant, bọta patties, achicha decorations.
Silicone Mold Cake Baking Cup 6- Cavity Tulip Flower Muffin Cake Pans Mold
Achịcha Baking Silicone na ndị na-ejide pan muffin buru ibu silicon Cupcake Muffin Mold
oke oke na oke ụdị nhọrọ iji gboo mkpa gị dị iche iche.
Nchekwa na ntụkwasị obi:A na-eji ihe silicone na-emepụta ihe ndị a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, bụ ndị dị mma ma dịgidere iji mee ihe, dị mma n'elu na ndị na-adịghị mma, ọ dịghị ihe mkpuchi kemịkalụ ma ọ bụ isi ísì, ndị na-adịghị egbu egbu, mgbanwe, uzuzu na-eguzogide ọgwụ na reusable, nwere ike tinye n'ime okpomọkụ n'etiti. mwepu 40 degrees Celsius ka 240 degrees Celsius, mgbe osisi na-mere nke eke osisi ihe, mma na eke, a pụrụ ịdabere na iji.
Nha ngwaahịa: dayameta bọmbụ - 2 ″ / 5cm / 50mm;Nha Ọkpụkpọ: 7.5 ″ x5.1″/ (19cmx13cm).The dayameta nke koko chocolate bombu bọọlụ bụ banyere 2 ", ọkara size, zuru okè kwesịrị ekwesị size maka ezinụlọ. Naanị anụ ụtọ gị ụtọ.
Iji: Ọ dị maka Microwave, oven, friji, friza na efere efere.Enwere ike iji mee ihe na-esi nri cupcake, ihe oriri, nri chọkọleti, swiiti siri ike, ihe na-atọ ụtọ, bọta patties, ihe ịchọ mma achicha, wdg.
Ojiji dị ọtụtụ: Akpụkpọ chocolate a adịghị mma na Microwave, oven, friji, friza na efere efere.Enwere ike iji mee ihe ndị na-esi nri cupcake, ihe oriri, nri chọkọleti, swiiti siri ike, ụtọ, bọta patties, ihe ịchọ mma achicha.
Ọ dị mfe ihicha: Akpụkpọ silicone maka bọmbụ chọkọleti ọ nwere ike ihicha ya na igwe efere.Ejiri silicone dị nro mee ya maka ihicha na nchekwa dị mfe.Ọ gaghị agbaji ngwa ngwa dị ka ọkpụkpụ rọba siri ike.